Wasaarada Batroolka oo shaacisay in uu bilowday tartanka bixinta liisanka balookyada saliida… – Hagaag.com
Wasaarada Batroolka oo shaacisay in uu bilowday tartanka bixinta liisanka balookyada saliida…
Posted on 13 Maajo 2020 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Wasaaradda Batroolka Xukuumada Soomaaliya ayaa shaacisay in uu bilowday tartanka bixinta liisanka balookyada saliidda laga baarayo, si loo helo shirkado waa weyn oo maalgashi ku sameeya baaritaanada shidaalka Soomaaliya .
Wasiir ku-xigeenka batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayaa sheegay in la bilaabay tartanka bixinta liisanka balookyada saliida laga baarayo, waxa uuna tilmaamay in ujeedka yahay in maalgashayaasha ka faa’iideystaan tartankan.
Hilaal ayaa tilmaamay in tartanka loo soo bandhigay maalgashadayaasha uunaa saamayn doono 7 balook oo ku kala yaal maamulada Galmudug, HirShabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
Wasaarada Batroolka ayaa sheegtay in talaabadani ay tahay uun shaacin ee marka la helo cid danaynaysa inay maal gashato oo shidaalkaa soo saarto la bilaabi doono wadaxaajoodka maalgashigaas.
Wasaarada Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya, ayaa xiligan u aragtay in ay tahay waqti ku habboon in la soo bandhigo qorshaha maalgashiga Shidaalka Soomaaliya si looga faa’iideysto.
Qaar kamid ah maamulada dalka Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland iyo Puntlanad ayaa horey u diiday sharciga shidaalka ay horey u ansixiyeen Baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya sidoo kale saxiixay Madaxweyne Farmaajo.